ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး - ဗိုင်းရပ်စ်သန့်ရှင်းမှု၊ အက်ပလီကေးရှင်း၊ Booster၊
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုး - သန့်ရှင်းရေး၊ အပလီကေးရှင်း၊
သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံ၊ ဒေတာတွေကိုဟက်ကာများတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်ခိုးယူရန် Android သည်အမြဲတမ်းနေရာဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းအက်ပလီကေးရှင်းများသည်သင့်ဖုန်းကိုအန္တရာယ်များမှကာကွယ်ပေးသည်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်သည့်အရာတစ်ခုလုံးကိုကာကွယ်ပေးသည်။ လျှောက်လွှာတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေး၊ မြန်စေခြင်း၊ အက်ပ်လော့ခ်၏လက်ဗွေနှင့်ဝိုင်ဖိုင်လုံခြုံရေးတို့ပါရှိသည်။ ယခုအခမဲ့ရယူပါ!
Antivirus & Applock သည်လုံခြုံရေးစင်တာဖြစ်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်များ၊ trojans များနှင့် malware များကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အားကူညီသည့်အခါသင့်ဖုန်းအားပြည့်စုံသောကာကွယ်မှုပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုခိုးယူခြင်းနှင့် spam များမှကာကွယ်ခြင်း၊ android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားခြင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် spyware များ၊ android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး remover နှင့် android virus remover နှင့် cleaner ။
💀 Android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းတွင်သင့်ဖုန်းအားသင်မည်သည့်နေရာ၌ရှိနေပါစေအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်ရှင်းရေးကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ စနစ်ရှိသင်၏အပလီကေးရှင်းများနှင့်ဖိုင်များအားလုံးတွင်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုစစ်ဆေးပါ။ အန္တရာယ်ရှိသည့်ပရိုဂရမ်များတပ်ဆင်ပြီးနောက်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်သတင်းစကားဆော့ဖ်ဝဲကိုပိတ်ဆို့ပြီးဖယ်ရှားပါ။ android ဖုန်းများအတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ android ဖုန်းအတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ လုံခြုံရေးစင်တာဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပစ္စည်းများ။
🔐 Private Apps များကိုပိတ်ပါ
Application သည် Android device ရှိ application များအားလုံးသော့ခတ်နိုင်ပြီး PIN lock, Pattern နှင့် Fingerprint ဖြင့် privacy ကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ သင်၏ application များကိုကာကွယ်ရန်ကူညီခြင်းအားဖြင့် Facebook, Virus Remover app၊ Line, Whatsapp or Wechat …ကဲ့သို့သောအခြားသူများကိုမကြောက်ကြပါ။
Memory (RAM) ကိုရှင်းလင်းပြီးဖုန်း၏အမြန်နှုန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ One Touch Speed ​​သည်သင့်ဖုန်းကို RAM ကိုဖြုတ်ခြင်း၊
🌪️ Android အတွက် Clean Up & Cleaner
မှတ်တမ်းဖိုင်များ၊ ယာယီဖိုင်များ၊ သမိုင်းမှတ်တမ်းများနှင့်အေဒီဖိုင်များအားလုံးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကူညီပါ၊ သိုလှောင်နေရာလွတ်ကိုလွတ်ပေးပြီးမိုဘိုင်းဖုန်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို Android လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အသုံးမကျသောအမှိုက်များကိုရှင်းလင်းရန်အကြံပြုပါ။ android ဖုန်းအတွက်အမှိုက်ပုံးများကိုအမှိုက်ပုံးများရှင်းလင်းရန်၊
ကိရိယာတစ်ခုလုံးကိုအေး: CPU၊ GPU အပူချိန်၊ အအေးခံဘက်ထရီ၊ Android အတွက် CPU Cooler ။ အချိန်နှင့်တပြေးညီအပူချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ပါ၊ ကိရိယာအခြေအနေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။ ဒီ function က CPU ကိုထိန်းချုပ်ပြီးအအေးခံနိုင်သည်။ ဂိမ်းများကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘဲ android အတွက်ဖုန်းအေးအေးဆေးဆေးကစားနိုင်သည်။
ဒီ application ကသင်၏ wifi network ကို hacker တိုက်ခိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကူညီပေးသည်။ Wifi အတွက်အခမဲ့၊ မြန်ဆန်ပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကွန်ယက်စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာ။
✔ Acceleration သည်ဖုန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကောင်းမွန်စေသည်
✔ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေး၊ android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးနှင့် android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ။
and android အတွက်အကောင်းဆုံး antivirus application၊ android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်သန့်ရှင်းရေး၊ malware ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး။
✔အကောင်းဆုံး antivirus နှင့် malware ဖယ်ရှားခြင်း၊ android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် malware ဖယ်ရှားခြင်း
phones android ဖုန်းများအတွက် adware ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ android အတွက်ဆန့်ကျင်သော malware နှင့် spyware ။
applications အသုံးချပရိုဂရမ်များ၊ ဂိမ်းများနှင့်ဖိုင်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစစ်ဆေးပါ
✔ Memory booster ram optimizer၊ သန့်ရှင်းသောမြန်နှုန်းမြှင့်မြှုပ်စက်
j junk file ram cache နှင့် virus များကိုသန့်ရှင်းပါ
finger လက်ဗွေနှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုသုံးပါ၊ ပုံစံ၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ပါသောအက်ပ် Locker၊
phone ဖုန်းအပူချိန်ကိုအအေးခံခြင်း၊ ဖုန်းကိုအအေးခံခြင်း၊
android အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ antivirus app ကိုနှစ်သက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားချီးမွမ်းပါ⭐⭐⭐⭐⭐သင်၏အားပေးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ant ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုရွေးချယ်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အောက်ပါအင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်။ ပိုမိုပျော်ရွှင်သောမိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံကိုသင့်အားပေးမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
deeper ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေးအတွက်အသင့်တော်ဆုံး junk cleaning algorithm ။
✔️ဗိုင်းရပ်စ် definitions updates များသည်ယခု 90% သေးငယ်ပြီး data သုံးစွဲမှုလျော့နည်းသွားသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုး - သန့်ရှင်းရေး၊ အပလီကေးရှင်း၊
6.59 ကို MB
AIO စတူဒီယို (မိုဘိုင်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ)